सहज परिस्थिति हुनासाथ परीक्षा लिन्छौ : मैनाली | Loksewa Darpan Nepal
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कोभिडका कारण लोकसेवाका परीक्षणा स्थगित् भएको सुनाउँदै परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा लिईने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्मचारीहरू भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ कि अब रोक्नुभयो जाँचहरू सबै ?
अहिलेको अवस्था यो कोभिडकै कारणले स्थगित भएको अवस्था छ ।
किन स्थगन गर्नुभयो, अब ? सबै कर्मचारीहरूलाई तपाईले परीक्षा नलिने ?
लिने । परिस्थिति सहज भएपछि लिने ।
अहिलेको अवस्था भीडभाड गर्न हुने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा थोरै नम्बरमा १० देखि २० जनाले जाँच दिने भईदिएको भए केही सुरक्षाका प्रबन्धहरू लिएर जाँच लिन हुन्थ्यो होला । तर अहिले कस्तो छ भने गत वर्षका ठुला ठुला जाँचहरू शाखा अधिकृतको अन्तिम परीक्षा बाँकी छ । त्यहाँ ३÷४ हजार व्यक्तिहरू दोस्रो चरणका लागि छनौट भएका छन् । त्यसैगरी नायब सुब्बाको परीक्षा बाँकी छ । खरीदारको दरखास्त मात्र लिएको अवस्था छ । यी अघिल्लो वर्षकै विज्ञापन हुन् । यो सालको विज्ञापन त अझ हामीले माग आउँछ, आउँदैन, थाहा छैन । सहज परिस्थिति हुनासाथ परीक्षा लिन्छौँ ।
मोटामोटी हाम्रो इच्छा थियो, दशैँ अगाडि भन्ने नै थियो । दशैँ अगाडि यो शाखा अधिकृतसम्मको परीक्षा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो । परिस्थिति अझै राम्रो भईसकेको स्थिति छैन । कोभिडका केशहरू अझै बढ्दै छन् । विद्यालय खोल्ने अवस्था आएन । विद्यालय, महाविद्यालयहरू नखुलिकन लोकसेवाको परीक्षा लिन कठिन हुन्छ ।
सम्भार : रिपोर्टस नेपाल
Tags: lok sewaLok sewa examinationsection officer